खाने अन्नको भन्दा दशौं गुणा बढी खानेपानीको समस्या – WASHKhabar
Sunday, December 15, 2019 206 पटक हेरिएको
अछाम– अछामको साँफेबगर नगरपालिका – ८ काटैकी शान्ता भुललाई सधैँ चिन्ताको विषय हुन्छ आज कसरी गाग्री भरि पानी जुटाउने ? उहाँलाई खाने अन्नको भन्दा पनि पानीको चिन्ता धेरै हुने गर्छ । खानेपानीको चिन्ताले रात दिन सोच्दा सोच्दा उहाँको मनमा खुसी कतै भेटिदैन । ‘घरमा अन्नको पनि समस्या छ तर पानीको जत्ति समस्या होइन, अन्न त एकपटक भण्डारण गरेपछि केही समयका लागि पुग्छ, तर पानी त दिनहुँ चाहिन्छ, नभएको पानी कहाँ खोज्न जाने ?’ शान्ता भुलले आफ्नो दुखेसो सुनाउनुभयो ।
चिन्ता नहोस् पनि कसरी गाउँमा भएका सबै खानेपानीका मुहान सुकिसकेका छन् । खानेपानीका मुहान (कुवा) सुकेपछि एक घण्टा लामो समय लगाएर अर्काे गाउँबाट पानी ल्याएर खानुपर्ने बाध्यता छ ।
यो बाध्यता शान्ता भुलको मात्र होइन, गाउँभरिकै मानिसको साझा समस्या हो यो । अर्को गाउँबाट पानी ल्याएर खानुपर्ने उनीहरूको दिनचर्या नै भइसकेको छ । दैनिक जस्तो खानेपानीकै जोहो गर्न उनीहरूले तीन घण्टा समय बिताउनुपर्छ ।
काटै टोलका भारत कुँवरका अनुसार कुनैबेला खाने २०÷२५ कुवामध्ये अहिले सुकेर २ वटा कुवामा सीमित भएका छन् । त्यसमा पनि पहिले जस्तो पानी छैन । त्यही कुवाको पानी बिहानदेखि बेलुकासम्म पालो कुरेर भर्ने गरेका छन् ।
गाउँमा भएका खानेपानीका मुहान सुकेपछि खानेपानीको दुःख भएको हो । शान्ता भुल सुस्केरा हाल्दै भन्नुहुन्छ ‘यो गाउँमा कहिले आउँछ होला खानेपानीको धारा ? गाउँमा खानेपानीका मुहान सुक्न थालेपछि राती राम्रोसँग नसुतेको वर्षाैँ भइसकेको छ । बिहान राती नै नगए धारामा पानी थाप्ने पालो समेत पाइँदैन । त्यसकारण बिहान ४ बजे नै खानेपानी ल्याउन जानुपर्ने बाध्यता छ ।’
शान्ता भुलको स्मरणमा रहेसम्म करिब ८ वर्षदेखि गाउँमा पानीको अभाव हुन थालेको हो । ‘करिब ८ वर्ष पहिले घर नजिकैको कुवामा खानेपानी हुन्थ्यो त्यति समस्या थिएन । समस्या भएपनि एक महिना जेठमा मात्र हुन्थ्यो । अहिले गाउँमा असार र साउनमा गरी जम्मा दुई महिना मात्र पानी हुन्छ । त्यो बेला पनि पर्याप्त हुँदैन’ शान्ता भूलले पुराना कुरा सम्झिनुभयो ।
अहिले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन, वनजंगल विनाश र मानवीय क्रियाकलापकै कारण गाउँका कुवा, पोखरी, इनार, खोला र नदीमा पानी घट्दै गएको छ । कतिपय खोलाका त मुहान सुकेर बगर भएका छन् । पानीका मुहान सुक्न थालेपछि गाउँमा खानेपानीको समस्या बढदै गएको हो ।
खानेपानीको पर्याप्त सुविधा नभएका यहाँका दर्जनौँ बस्तीमा कुवा, पँधेरो र पोखरीको पानी उपभोग गरिदै आएको छ । विगतका वर्षहरूमा वर्षातमा खानेपानीको समस्या खासै हुँदैनथ्यो तर अहिले भने वर्षायाममा समेत पानीको समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ । पानीकै समस्याका कारण स्थानीयको एक आपसमा मनमुटाब र झैझगडासमेत हुने गरेको छ ।
गाउँ घरमा डोजरले सडक खन्दा कतिपय ठाउँमा पानीका मुहान नै हराउन थालेका साँफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर ८ की चम्पा कुँवरले बताउनुभयो । सडक खन्ने नाममा प्राविधिक रिपोट र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी जथाभावी सडक खन्दा पानीका मुहान हराउन थालेको उहाँको भनाई छ ।